Nepali Rajneeti | चिट्ठामा ६ करोड जिते ! जितेको पैसाले किनेको खेतमा भेटियो यस्तो !
कार्तिक ६, २०७८ शनिबार १३० पटक हेरिएको
काठमाडौं । भनिन्छ भाग्य हुनेको तालुमा आलु फल्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा एकजना व्यक्तिको जीवनमा भाग्य यसरी उदायो कि रातारात उनी करोडपति बने ।
भारतको केरलाका ६६ वर्षका बी रत्नाकर पिल्लई नामका व्यक्तिले सन् २०१८ मा ६ करोड भारु बराबरको चिठ्ठा जितेका थिए । चिठ्ठामा जितेको त्यो रकमले उनले खेत किने ।
यद्यपि यी सिक्काहरुमो मूल्यको आँकलन गर्न सकिएको छैन । परीक्षणका लागि यी सिक्काहरुलाई ल्याबमा पठाइएको छ । विज्ञहरुले यी म्द्राको मूल्यांकन गर्नेछन् ।यी सिक्काहरु त्रावणकोरका दुईजना राजाहरुको शासनकालका बेला चलन चल्तीमा थिए ।
तीमध्ये पहिलो राजा मूलम थिरुनल राम बर्मा हुन् । उनको शासनकाल १८८५ देखि १९२४ को बीचमा थियो । त्यस्तै दोश्रो राजा चिथिरा थिरुनल बाला राम बर्माको शासनकाल १९२४ देखि १९४९ सम्म चलेको थियो । उनी त्रावणकोरका अन्तिम शासक पनि थिए ।एजेन्सीको सहयोगमा साभारगरियको खबर ।